प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले हाम्रो दिमागलाई निकै लोसो बनाइसकेको छ । सानादेखि ठूला कुराहरु याद् राख्न हामी प्रविधिकै सहायता लिन्छौँ । हामीले आफ्नो दिमागको प्रयोग गर्न पुरै बन्द गरिदिएका छौँ, जसको सिधा प्रभाव स्मरण शक्तिमा परिरहेको छ । तार्किक क्षमता र दिमागी जटिलताहरु बाट टाढा रहँदा स्मरण शक्ति कमजोर बनिरहेको छ ।
यी त समस्याका कुरा भए, त्यसो भए समाधान के त ? ढुक्क हुनुस्, समाधान पनि छ । त्यसका लागि तपाईंले आफ्नो दैनिकीलाई नयाँ ढंगले बिताउनु पर्ने हुन्छ । जसले तपाईंको दिमागलाई चुस्त र फुर्तिलो राख्न सघाउँछ ।
१. केही नयाँ
बुद्धि बढाउनका लागि पारम्परिक तरिका छाडेर केही नयाँ तरिका अपनाउने कोशिश गर्नुस् । यो नयाँ तरिका तपाईंको स्मरण शक्ति बढाउन सहयोगी हुन्छ । किनकी जब हामी केही नयाँ गर्ने कोशिश गर्छौँ त्यसले दिमागमा राम्रैसँग प्रभाव पार्छ, हामीलाई यस्तो कुरा सहजै याद रहन्छ पनि । जस्तो कि खानामा नयाँ रेसिपी अपनाउनुस्, व्यायामका लागि नयाँ तरिका अपनाउनुस् अनि आफ्नो दिनचर्यालाई थोरै परिमार्जन गरेर रोमाञ्चक बनाउनुस् ।
२. नियमित व्‍यायाम
व्यायाम शरीरलाई फिट र स्वस्थ राख्न मात्र होइन, दिमागलाई ताजा र फुर्तिलो बनाइराख्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । दैनिक व्यायामले दिमागलाई फुर्तिलो बनाइराख्न मद्दत गर्छ । व्यायाम गर्नाले हाम्रो शरिरमा रक्तसञ्चार सहज र नियमित ढंगले हुन्छ, साथै दिमाग सहित शरीरका सम्पूर्ण कोशिकाहरु अधिक सक्रिय हुन्छन् । यसले हामीलाई स्वस्थ रहन त मद्दत गर्छ नै दिमागी क्षमता पनि बढाउँछ ।
३. दिमागी कसरत
स्मरण शक्ति बढाउनका लागि दिमागी कसरत पनि अति आवश्यक छ । कति प्रविधिको मात्र भर पर्ने आफ्नो दिमागलाई पनि थोरै काम दिनुस् । कम्तिमा केही अत्यावश्यक मोबाइल नम्बरहरु सेटमा सेभ नगरी दिमागमा सेभ गर्नुस् । यसो गर्दा तपाईंको दिमागले काम त पाउँछ नै, स्मरण शक्ति पनि बढ्दछ । साथै दिमाग खर्चिनु पर्ने खालका खेल तथा आइक्यू प्रश्नहरुमा चासो राख्ने गर्नुस् ।
४. उत्‍सुकता जरुरी
सबै कुरालाई सामान्य तरिकाले लिनुको साटो उत्सुकताका साथ लिने गर्नुस् । नयाँ कुरा जान्न हमेसा उत्सुक रहनुस्, नयाँ ठाउँमा जाने र नयाँ काम गर्ने मौका जब मिल्छ, तब स्वीकार गरिहाल्नुस् ।
दिमागलाई स्वस्थ र फुर्तिलो राख्नका लागि सकारात्मक सोच निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सकारात्मक सोचले मानिसलाई तनावबाट मुक्ति दिन्छ । जब तनावमुक्त भइन्छ, तब हाम्रो दिमागले सहज र सरल ढंगले आफ्नो काम गर्न सक्छ । तनाव र नकारात्मक सोचले दिमागी क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ । त्यसैले तनाव दिमागको सबैभन्दा ठूलो दुश्मन हो । त्यसैले सकारात्मक सोचेर तनावबाट बच्ने कोशिश गर्नुहोस् ।
६. सन्तुलित आहार
शरीरका अन्य अंगहरुमात्र होइन, दिमागलाई स्वस्थ राख्नका लागि पनि सन्तुलित आहारको निकै महत्व छ । हामी जे खान्छौँ, त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर दिमागी कार्यक्षमतामा पर्छ । त्यसैले स्वस्थ र पौष्टिक आहार सेवन गर्नुस् । खानामा ताजा फल र हरियो सागसब्जीलाई पनि समावेश गर्ने गर्नुहोस् ।
७. पुस्तक पढौँ
पुस्तक दिमागको सबैभन्दा राम्रो साथी हो । पुस्तक पढ्दा दिमागी कसरत हुन्छ, यसले स्मरण शक्ति बढाउन सहयोग गर्छ । यसका साथै अनुसन्धानबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ कि पुस्तक पढ्ने बानीले मानसिक तनावबाट मुक्त हुन मद्दत गर्छ । यसले तार्किक क्षमता र स्मरण शक्ति दुवै बढाउँछ ।
८. भरपूर निद्रा
भरपूर निद्रा मानिसका लागि अति नै आवश्यक छ । यसले हाम्रो दिमागलाई आराम मिल्दछ । फेरि हामी निदाउँदा हाम्रो निस्क्रिय रहन्छ भन्ने होइन, सक्रिय रहने तरिकामा फरक पर्छ । दिनमा कम्तिमा ७ देखि ९ घण्टा निद्रा अति आवश्यक छ । ९ घण्टाभन्दा बढी सुत्नु फेरि स्वास्थका लागि प्रतिकुल हुने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
क्वारेन्टिनमै मदिरा पुर्‍याउदा …
आर्थिक संकट देखिएको भन्दै रोल्स–रोयसले कटाैती गर्यो ९ हजार कर्मचारी
जम्मु–काश्मिरमा पाँच चिकित्सकमा कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि
नरैनापुर क्‍वारेन्टाइनमा बसेका ४७ जनामा कोरोना संक्रमण
उडेको केही छिनमै सैनिक विमान दुर्घटनाग्रस्त
धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यू भएको महिलामा कोरोना पोजेटिभ भेटियो
सम्पर्कविहीन प्रहरी मृत फेला
Uncategorized, राजनीति, समाचार
प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्- नेपाली भूमि अतिक्रणविरुद्ध तत्काल कदम चाल्नुपर्छ
संसदको बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै
नेपालमा २ महिनाको बच्चासहित १७ जना थपिए कोरोना संक्रमित
नेपालमा थप ६ जनामा पनि कोरोना पुष्टि, कूल संक्रमित संख्या ७५ पुग्यो
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा दुवै अध्यादेश खारेज
आज ३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, नेपालमा संक्रमितहरुको संख्या ४५